Dadyowga loo diiday sharciyadda oo dib loogu celin doono dalalkoodii kadib weerarkii Stockholm ka dhacay | Somaliska
Inkastoo weerarkii ka dhacay magaaladda Stockholm ee caasimadda Iswiidhan cid walbaa geliyey dareen cabsi leh, hadana waxeey dhacdadaasi u muuqataa mid wax ka badaleeysa siyaasadda muhaajirinta gaar ahaan kuwooda sharciyada loo diiday.
Dowladda Iswiidhan ayaa dib u eegis ku sameeyneysa dadka sharciayda loo diiday kuwaas oo haatan la runsan yahay in ay ku jiraan kuwo ammaanka halis ku ah, sida ninka dadka ku xasuuqay bartamaha Stockholm. Saxaafadda maxaliga ah ayaa qortay in dad gaaraya kumaan kun dib loogu celin doono dalalkii ay ka yimaadeen.
Wasiirka arrimaha gudaha Anders Ygeman, ayaa sheegay in aaneey jirin sabab ama baahi keeneysa in Iswiidhan ay sii joogaan dadka iyagu loo diiday sharciyada, dibna loogu celinayo dalalkii ay ka yimaadeen. Hadalkan ayaa waxaa cododkooda ku biiriyey siyaasiinta dalka oo dowladda ka codsaday ineey la timaado xal iyo isbadal la xirriira siyaasadda muhaajirinta.
Ma ahan markii ugu horeysay oo qof magangalyo doon ahi fal dambiyeed ka geeysto dalka. Sanadkii 2015-ta ayaa waxaa weerar lagu dilay labbo ruux oo xilligaasi ka dukaameeysnayey dukaan weeyn oo laga iibsado alaabada kuna yaalay magaaladda Västrås. Ninka falkaan geystay oo ka soo jeeda asal ahaan dalka Ereteraya ayaa ugu dambeyntii xabsi daa’in lugu xukumay. Falkii ka dhacay magaaladd Stockholm-na waxaa markale boog ka damqinayaa shacabka oo weli ay dhagahooda ka guuxayaan falka ninkii erateeyaanka ahaa dadka ku dhex dilay dukaanka.
Wasiirkaarrimaha gudaha Anders Ygeman, waxaa uu sheegay indowladiisa ay dar dar gelin doonto oo ah wasiirka arimaha gudaha Sweden, ayaa sheegay in dowladiisu ay dar-dar galineyso dib u celinta dadyowga loo diiday sharciayda, isla markaana lagu amray in ay dalka ka baxaan. Ygeman ayaa sidoo kale sheegay in dowladdu ay kor dhin doonto qarashaadka iyo awooda ku baxaya booliska amniga qaabilsan. Booliska ayaa la filayaa ineey sameeyaan baaritaano lugula soconayo goobaha ganacsiyadda bulshadda si looga hortago dadyowga loo diiday sharciayda ee suuqyadda madoow kaga shaqeeysta. Talaabadan ayaa imaneeysa xilli ninkii falkan geeystay ee Rakhmat Akilov, uu ahaa nin suuq madoow ku shaqeeysanayey tan iyo markii loo diiday dal ku jooga Iswiidhan sanadki 2014-kii.